Daawo Sawiro: Dhulgariir xoog leh oo maanta mar kale ku dhuftay dalka Talyaaniga!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Daawo Sawiro: Dhulgariir xoog leh oo maanta mar kale ku dhuftay dalka Talyaaniga!!
Daawo Sawiro: Dhulgariir xoog leh oo maanta mar kale ku dhuftay dalka Talyaaniga!!
Oct 30, 2016WARAR
Dhulgariir xoog ah oo awoodiisa lagu sheegay 6.6M ayaa mar kale ku dhuftay saakay oo axad ah bartamaha dalka Talyaaniga, waxaana dhulgariirkan xoogiisa laga dareemay meelo badan oo dalkasai kamid ah ay ku jirto magaalada Roma.
Sida ay baahinayaan Warbaahinta dalka Talyaaniga dhulgariirka xoogiisa ayaa ku dhuftay meel ku dhaw magaalada Perugia oo kutaala bartamaha dalka Talyaaniga, waxaana dhulgariirkan uu sababay in ay bur buraan dhismooyin badan.
waxa maanta ku dhaawacmay 11 qof Wali lama soo sheegin wax dhimasho ah oo ka dhashay dhulgariirkan saakay mar kale ku dhuftay qeybo kamid ah dalka Talyaaniga, waxaana dhulgariirkan ku barakacay dad badan oo laga saaray gurayhoodii.
Dhulgariirkan oo kale oo dhawaan ku dhuftay bartamaha dalka Talyaaniga ayaa galaaftay nolosha dad ka badan 250 qof, waxaa sidoo kale ku bur buray dhismayaal badan ay ku jiraan kaniisado iyo kuwa qadiimi ah.
Previous PostDaawo Muuqaal Cajiib ah: 9-Jir Soomaali ah oo Noqday musharax Madaxwayne!! Next PostCiidamada Nabad suguda Galmudug oo xoog kusoo furtay Gabar Ajnabi ah oo afduub ahaan loo heestay!!